ရန်ကုန် မှာ အဓိကရုဏ်း အတွက် မီးမွှေးမှု တွေ လုပ် | The FNG
ရန်ကုန် မှာ အဓိကရုဏ်း အတွက် မီးမွှေးမှု တွေ လုပ်
June 16, 2012 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
ယနေ့ နံနက် အစောပိုင်းက ရန်ကုန် တိုင်းဗဟန်း မြို့ နယ် ကုက္ကိုင်းလမ်းဆုံ နှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ
လမ်းမီးပွိုင့် ကြား ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ပလီ အရှေ့တွင် မော်တော်
ကားတစ်စီး ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရေးတွင် အထူးလေ့ကျင့်ထား သည်ဟုယူဆရသော
အရွယ်တူသန်မာ ဖြတ်လတ်သော သူ လူ ၅၀ ခန့်အား ချပြီး အချိန်ကိုက်ပြန်လာခေါ်သွားကြောင်း
သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမားများသည် ပလီ၏ ဆိုင်းဘုတ်နှင့် မျက်နှာစာ
ဆိုင်တစ်ဆိုင် အပါအ၀င် ဆိုင် ၃ ဆိုင်အားဝင်ရောက်ဖျက်စီးခဲ့ကြောင်း FNG မှ သတင်းရရှိသည်။
”အဲဒီလာဖျက်စီးတဲ့သူတွေက သာမာန် အရပ်သားတွေနဲ့ မတူဘူး အတော်လေးကို စနစ်တကျ
လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ် အမိန့်တစ်ခုအောက်မှာ ၀ုန်းကနဲ့ရောက်လာပြီး ဖျက်ကြ
တယ်ပြီးတော့ ချက်ခြင်း အချိန်ကိုက်လာခေါ်တဲ့ကားပေါ်ကိုတက်ပြေးသွားကြတယ်ဟု
အရပ်အမောင်းတွေက ကောင်းတယ် တညီတည်းပဲ တော်တော်စနစ်တကျ လာဖျက်သွားတာ”
ဟု ပလီပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူ မှ ပြောသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားချိန်အပြီး မြို့နယ်ရဲမူးက ဒေသခံပြည်သူ အနည်းငယ်ကို အမူမဖွင့်ပါနဲ့ မီဒီယာ
အဆိုပါ အခင်းဖြစ်ပွား ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အတွင်းပါဝင်ခဲ့သော ဆရာတော်တချို့က
ရန်ကုန်မြို့အား ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်စေချင်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်ဟု
မြို့တော်ခမ်းမ တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးနှင့် လုံထိမ်းအဖွဲ့ အပါ အ၀င် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး
အဖွဲ့ ကြီး ၅ ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ မှ ၂၄ နာရီ အခြေအနေအား စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသော်လည်း
အဆိုပါ ဖျက်စီးခံရမူနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန်အထိ တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ
ယခု သီတင်း ပတ် အတွင်း ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် မငြိမ်သက် မှု များ တွင် အနည်း
ဆုံး လူ ၂၉ ဦး သေဆုံး ပြီး ၊ အိမ်ခြေ ၃၀၀၀ ကျော် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံရ ကာ ၊ လူပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော်
အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ပွား ခဲ့ ရသည်။
ယမန်နေ့က ရန်ကုန် မြို့ တွင် ဆူပူအကြမ်းဖက် မှု များ ပြု လုပ် မည် ဟု သတင်း ထွက်ပေါ်ခဲ့
သော်လည်း တင်းကျပ် စွာ ချထားသည့် လုံခြုံရေး ကြောင့် ငြိမ်သက် နေခဲ့ သည်။
← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့နော်ဝေ ၀န်ကြီးချုပ် မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ဖို့ ကိစ္စ ဆွေးနွေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်း ရေးဆု မိန့် ခွန်း ဓာတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယို →
10 responses to “ရန်ကုန် မှာ အဓိကရုဏ်း အတွက် မီးမွှေးမှု တွေ လုပ်”
hanmyint June 20, 2012 at 10:08 am · ·
လူမျိုမှ လူမျိုးပြုတ်မယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ
Pingback: Khoon Ka Badla,Movie-ရခိုင်မွတ်ဆလင်အရေး တစ်နေ့သွေးကြွေးပေးဆပ်ရလိမ်မည် « danyawadi·
wartlar June 16, 2012 at 8:02 pm · ·
ဒီကိစ္စတွေက မော့်ဆတ်အဖွဲ့ကလား စီအိုင်အေကလား ရိုးလွန်းလို့
Mg Lun June 16, 2012 at 6:55 pm · ·
That might beawell-planned operation by some authority figures. The police and authorities are really hopeless and helpless and could not handle such situation effectively. Poor situation for development of Burmese Democracy.
Bo Gyi June 16, 2012 at 5:30 pm · ·
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက် သမားတွေက လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ထင်တယ်.သူတို့က ဂျမားအစ်စလမ် မစ် အဖွဲ့နဲ့ ချိတ် ဆက်ပြီး စနစ်တကျ လေ့ကျင့် ထားတဲ့ အထောက်အထားကို အမေရိကန် စီအိုင်အေက သက်သေခိုင်ခိုင်မာ မာ တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ..သူတို့က လေ့ကျင့်ထားသူတို့ ဆိုတော့အခုလုပ်သွားတဲ့ ပုံစံ က သိပ်တူနေတယ်.ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အစ်စလမ်ကို ရန်တိုက်ပေးပြီး ဂျီဟတ် လုပ်ဖို့ ကြံရွယ်ပုံ၇တယ်.အားလုံး သတိထားကြပါ..မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ လက်နက်ဆောင်ထားကြပါ..မိမိကတော့ စမလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ့်လာ ရန်ပြုလာရင်တော့ ကလေးပါမကျန်နဲ့
သူအောင် June 16, 2012 at 4:43 pm · ·
လုံးဝ ကန့်ကွက် ရှုံ့ချပါသည်… တည်ငြိမ်အေးဆေးခြင်းကို အလိုမရှိသော… နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာမစောင့်သိသော လူတစ်စုဖြစ်သဖြင့်.. ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာ.. ဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါစေ.. ကျွန်တော်အနေနှင့် ထိုလုပ်ရပ်အပေါ် ကန့်ကွက်ပါသည်…၊ ကျွန်တော်နှင့်အတူ ဘယ်ဘာသာ ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ.. မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်မှန်ပါက.. ထိုလုပ်ရပ်အပေါ်.. မှန်ကန်စွာသုံးသပ်နိုင်ပါရန်.. အကြံပြုအပ်ပါသည်.. ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာစေရန် ဆန္ဒပြုလျက်….
dekaytar June 16, 2012 at 3:32 pm · ·
WHAHAHA NIce for Muslims people. why did Muslims people in YAKINE?
mi June 18, 2012 at 11:32 am · ·
have u ever read myanmar newspaper or myanmar news? if so, u can see the damaged mosques on that list. very disgraceful and irresponsible comments fromastupid person. ur comments shows ur ability of thinking and standard of ur education.
htinlin June 16, 2012 at 3:00 pm · ·
Kay June 16, 2012 at 2:10 pm · ·
လုံးဝကန့် ကွက်ရှုံ့ ချပါတယ်..
ဘာလို့ ပြည်သူလူထုကို အဓိကရုဏ်းတွေနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ​တောင်
GO TO HELL !! အစိုးရရဲ့ တရားဥပေဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ အမှန်တရားကို